Burma Partnership » Myanmar Civil Society Meeting Legislature on Proposed Association Draft Law
Myanmar Civil Society Meeting Legislature on Proposed Association Draft Law
By Representatives of 281 Burmese civil society organizations • August 15, 2013
The representatives of 281 civil society organizations, community based organizations and networks from upper and lower Myanmar held the meeting with Hluttaw representatives on August 15 in Nyapyitaw regarding the proposed Association Draft Law.
This is the outcome of the Myanmar civil society organizations’ efforts reaching out to the Legislature and raising their concerns on this draft law. Previously on July 31, 52 Myanmar Civil Society Organizations held consultation on and collectively issued the statement of objection to the Associational Draft Law published in the government newspaper of July 27, 2013. The statement highlighted the flaws of the draft bill including it being against the 2008 Constitution and Freedom of Association and its drafting process lacks consultation with CSOs, and called on the Parliament to delay the process to table at the parliament.
On August 13th, the CSOs held parallel workshops in Yangon and Mandalay in order to hold broader consultations and attended by representatives from total of 281 civil society organizations, community based organizations and networks from upper and lower Myanmar, including Yangon, Pago, Mandalay, Sagaing, Magway, Ayeyerwaddy and Tanintharyee Regions and Mon, Chin, Kachin, Shan, Kayin and Kayah States. Outcomes of these workshops were brought to today’s meeting where about 60 members of civil society organizations and about 80 members of parliamentary committees/commissions from both Amyotha Hluttaw and Pyi Thu Hluttaw and officials from the Ministry of Home Affairs frankly exchanged and deliberated their opinions on the draft law.
Three groups of representatives presented their arguments with rationales and case studies under the following three options:
There is no need to adoptaseparate association law, as the right to form association is the constitutional right of the people;
In case should the Hluttaw decides to drawalaw regarding association, drafting of this law must be carried out in consultation with and participation by the wider civil society organizations and this law should only be for the voluntary registration;
In case should the Hluttaw decides to adopt the current draft law, it must be amended accordingly with the proposed amendments from the civil society organizations.
The representatives also collectively expressed the kind of law they want and presented their common position as follow, should the Hluttaw decide to adoptalaw regarding association.
To allow the formation of association freely in compliance with the 2008 constitution and international laws and Conventions;
Should the law be adopted, it should be called, “Association Registration Law” only for the associations to register with registration offices voluntarily should they wish and decide;
The registration law shall include no sections and clauses on punishment;
To suspend the 6/88 Association Law during the time of consultation process of the current draft. Suspend
The Hluttaw and Ministry of Home Affairs representatives seriously listened to the deliberations of the CSOs and held interactive discussions and responded that they would seriously consider the proposals from the civil society.
We earnestly hope that the Hluttaw will adopt our proposal in their upcoming deliberations over this draft law and that there will be positive outcomes for the protection of the rights of our people through our mutual respect and cooperation between the civil society and members of parliamentarian in future.
1. Nwe Zin Win (095031246) working group
2. Thandar Tin (095418197) Yangon
3. Dr.Kyaw Thu (092043709)
အသင်းအဖွဲ့များဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီ၊ ကော်မရှင်များတွေ့ဆုံပွဲနှင့် ပတ်သက်သောသတင်းထုတ်ပြန်ချက်
သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်၊ နေပြည်တော်
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်နေ့ကအစိုးရသတင်းစာများတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သော `အသင်းအဖွဲ့များဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်း နှင့်ပတ်သက်ပြီးဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ် များစုစည်းကာဆွေးနွေး တိုင်ပင်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်တစ်ရပ်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း ကိုယ်စားလှယ် အချို့သည် နေပြည်တော်တွင် ဥပဒေကြမ်းကိုရေးဆွဲသော ပြည်သူ့ရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီနှင့် တွေ့ဆုံပြီးအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ သဘောထားများ၊ လိုလားချက်များကိုရှင်းပြခဲ့ပြီး လက်ရှိထုတ်ပြန်ကြေညာထားသော ဥပဒေကြမ်းကိုသဘောတူ လက်ခံနိုင်ခြင်း မရှိကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများအကြား ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာဥပဒေပြုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ရန် လိုကြောင်းလည်းဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။
သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် အထက်နှင့်အောက်မြန်မာပြည်မှ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း၊ ရပ်ရွာအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ (စုစု ပေါင်း ၂၈၁ ဖွဲ့) သည် ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့များ၌ တစ်ပြိုင်နက်တည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ရပ်တည်မှုများကိုကိုယ်စားပြုဆွေးနွေးရန် အတွက် ကိုယ်စားလှယ်များကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ရွေးချယ်ပေးလိုက်သော ကိုယ်စား လှယ်များသည် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ကနေပြည်တော်တွင်ကျင်းပသော `အသင်းအဖွဲ့များဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီ၊ ကော်မရှင်များတွေ့ဆုံသည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ´တွင် လွှတ်တော် နှစ်ရပ်ပေါင်းမှ ကော်မတီ/ကော်မရှင်များမှ ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း၈၀ ခန့်နှင့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံ ခဲ့သည်။ထိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဒုတိယနာယကဦးနန္ဒကျော်စွာ တက်ရောက်ပြီးအဖွင့်စကားနှုတ်ခွန်း စကား ပြောကြားပေးခဲ့သည်။
အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်များသည် မိမိတို့၏ ရပ်တည်ချက်များကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြရာတွင် အောက်ပါအချက်များကို အဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
၁။ အသင်းအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းခြင်းသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါအခွင့်အရေးအရ လွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက် ခွင့်ရှိသည့်အတွက် ဖွဲ့စည်းခွင့်အတွက် သီးခြားဥပဒေတစ်ရပ်ပြဌာန်းစရာမလိုကြောင်း
၂။ အကယ်၍ လွှတ်တော်ကအသင်းအဖွဲ့များဆိုင်ရာ ဥပဒေတစ်ရပ်မဖြစ်မနေပြဌာန်းမည်ဆိုပါကလည်း ဥပဒေကြမ်းပြုစုသည့် ဖြစ်စဉ်တွင် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပြီး ထိုဥပဒေသည် လည်းမိမိတို့ သဘောဆန္ဒအလျောက် မှတ်ပုံတင်လိုသောအဖွဲ့အစည်းများအတွက် မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေသာဖြစ်သင့်သည်
၃။ လက်ရှိအဆိုပြုထားသော ဥပဒေမူကြမ်းကိုလွှတ်တော်အတွင်းဆက်လက်ဆွေးနွေး မည်ဆိုပါကလည်း အရပ်ဘက်အဖွဲ့ အစည်းများကအဆိုပြုထားသော အချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်း စားပြီးရေးဆွဲပေးသည့်ကြောင်း
အသင်းအဖွဲ့များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဥပဒေတစ်ရပ်ပြဌာန်းမည်ဆိုပါကအရပ်ဘက်အဖွဲ့ အစည်းများလိုလားသောယေဘုယျ ရပ်တည်ချက်များကိုလည်းအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
၁။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် နိုင်ငံတကာဥပဒေများ၊ ကွန်ဗင်းရှင်းများအရအသင်းအဖွဲ့များ လွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်
၂။ အကယ်၍ ဥပဒေပြဌာန်းမည်ဆိုပါက `အသင်းအဖွဲ့များမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ´ သာဖြစ်သင့်သည်။ မိမိ သဘောဆန္ဒ အလျောက် မှတ်ပုံတင်လိုသောအဖွဲ့အစည်းအနေနှင့်လည်းသက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် မှတ်ပုံတင်ရန်
၃။ မှတ်ပုံတင်ဥပဒေတွင်လည်း ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်အခန်းများထည့်သွင်းခြင်းမပြုရန်
၄။ လက်ရှိဥပဒေကြမ်းကိုဆွေးနွေးနေဆဲကာလတွင် တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သော အသင်းအဖွဲ့များဆိုင်ရာဥပဒေ (၆/၈၈) ကို ဆိုင်းငံ့ ထားပေးရန်
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများသည်လည်း အရပ်ဘက်အဖွဲ့ အစည်းများမှ ကိုယ် စားလှယ်များ၏ ဆွေးနွေးချက်များကို အလေးအနက်ထား မှတ်တမ်းတင်နားထောင်ကာ လွှတ်တော်နှစ်ခုမှ သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်စား လှယ်များက ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများအနေနှင့် လွှတ်တော်ကအဆိုပါဥပဒေကြမ်းကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးရာတွင်လည်း အရပ်ဖက်အဖွဲ့ အစည်းများ၏ အဆိုပြုချက်များကိုအပြည့်အ၀ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးရန် တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ ပြည်သူများ၏ အခြေခံအခွင့် အရေးများကိုအကာအကွယ်ပေးသောဥပဒေများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရေးအတွက်လည်း အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များအကြားအပြန်အလှန်လေးစားမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများဖြင့် အနာဂတ်တွင် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွား နိုင်မည်ဟုလည်း အလေးအနက်မျှော်လင့်ပါကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။
၁။ ဒေါ်နွယ်ဇင်ဝင်း(၀၉ ၅၀၃ ၁၂၄၆)
၂။ ဒေါ်သန္တာတင် (၀၉ ၅၄၁ ၈၁၉၇)
၃။ ဒေါက်တာကျော်သူ (၀၉ ၂၀၄၃၇၀၉)
၄။ ဦးဟန်ဇာမောင် (၀၉ ၅၁၈၂၂၁၁)
၁။ ဒေါက်တာဝင်းမြင့် (၀၉ ၂၀၀၂၃၆၆)
၂။ ဒေါက်တာဌေးလွင် (၀၉ ၇၃၂၃၇၈၁၅)
၃။ ဦးသွင်စိုး (၀၉ ၂၀၂၅၈၉၁)
Tags: Association Law, Burmese, Freedom of Association, Laws
Burma: Drop Charges Against Former Activist Monk
AAPP Condemns the Use of Violence and Torture in Burma and Demands the Immediate Unconditional Release of All Political Prisoners
Burma’s Draft Association Law: A Smokescreen for Further Repression?